काठमाडौँ । अक्टोपसलाई समुन्द्री जीवमा सबैभन्दा उक्तिष्ट जनावर मध्ये एक मानिन्छ । धेरै विज्ञहरूले यसलाई विदेशी जीव पनि भनेका छन् । जसलाई यिनीहरूका बारेमा थोरै थाहा छ, उनीहरूलाई भनौं, तिनीहरू इन्भर्टेब्रेट हुन् । यसको मतलब तिनीहरूको मेरुदण्ड हुँदैन । यो असामान्य लाग्न सक्छ, तर वास्तवमा, पृथ्वीमा लगभग सबै जनावरहरू इन्भर्टेब्रेट्स हुन् । अक्टोपस एक विशेष प्रकारको इन्भर्टेब्रेट्स हो, जसलाई सेफालोपोड भनिन्छ । नामको अर्थ 'हेड-फुट' हो किनभने सेफालोपोड्सका हातहरूले टाउकोलाई घेर्छन् । अन्य प्रकारका सेफालोपोडहरूमा स्क्विड, नटिलोइड्स र क्याटेलफिस समावेश छन् ।
समुद्री जनावरहरूले एकअर्कासँग र तिनीहरूको वातावरणसँग कसरी सञ्चार गर्छन् भन्ने बारे बिभिन्न अनुसन्धान भएका छन् । आफ्नो खाना समात्नको लागि, अक्टोपसहरूले धेरै रणनीति र चालहरू प्रयोग गर्छन् । केही अक्टोपसहरूले आफ्नो शिकारलाई आकर्षित गर्नका लागि आफ्नो हतियार बेर्छन् । कसै-कसैले क्ल्यामको खोलमा ड्रिल गर्न आफ्नो कडा चोंच प्रयोग गर्छन् ।
सबै अक्टोपसहरू विषालु हुन्छन्, तिनीहरूको शरीरमा विषाक्त पदार्थहरू हावी हुन र तिनीहरूको शिकारलाई मार्न । तिनीहरू कहाँ बस्छन् ? अक्टोपसका लगभग ३०० प्रजातिहरू छन्, र तिनीहरू अन्टार्कटिका वरपरको चिसो पानीमा समेत संसारको हरेक महासागरमा पाइन्छ । तिनीहरूको रगतमा एक विशेष पदार्थले चिसो पानी प्रजातिहरूलाई अक्सिजन प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ । जसका कारण उनीहरुको रगत पनि नीलो हुन्छ । तपाईले विभिन्न गहिराइमा अक्टोपसहरू पनि फेला पार्न सक्नुहुन्छ । केही पानीको सतहभन्दा केही फिट तल न्यानो उष्णकटिबंधीय चट्टानहरूमा पाइन्छ । अरूहरू गहिरो समुद्रमा बस्छन्, व्यावहारिक रूपमा अँध्यारोमा। पाइने सबैभन्दा गहिरो प्रजाति डम्बो अक्टोपस हो, जुन २२ हजार ८ सय फीट तल देखिन्छ ।
तिनीहरू कति स्मार्ट छन् ? अक्टोपसहरू तिनीहरूको वर्गका सबै प्रजातिहरूको प्रमुख हुन् । तिनीहरू पृथ्वीमा सबैभन्दा चतुर इन्भर्टेब्रेटहरू हुन् । तिनीहरूसँग नौवटा मस्तिष्कहरू छन्, प्रत्येक हातमा सानो मस्तिष्क र अर्को तिनीहरूको शरीरको बीचमा । प्रत्येक हातले स्वतन्त्र रूपमा चल्न सक्छ, कुनै वस्तुको स्वाद लिन वा छुन सक्छ, तर केन्द्रीय मस्तिष्कले प्रेरित गर्दा सबै हातहरू सँगै काम गर्न सक्छन् । अक्टोपसहरूले आफ्नो दिमागको राम्रो प्रयोग गर्छन् । तिनीहरूले पजलहरू समाधान गर्न सक्छन्, विशेष गरी जब इनाम खाना हुने गर्दछ ।
अक्टोपसहरू आफूलाई भेषमा राख्ने विशेषज्ञहरू हुन् जसले गर्दा तिनीहरू आफ्नो वरपरको वातावरणमा मिसिन सक्छन् । यो गर्ने एउटा तरिका रङ परिवर्तन गर्नु हो ।
विशेष कोशिकाहरू, जसलाई क्रोमाटोफोर भनिन्छ, मांसपेशिहरूलाई थप रंग देखाउनको लागि कडा गर्न, वा तिनीहरूलाई कम देखाउनको लागि मस्तिष्कबाट सङ्केतहरू प्राप्त गर्दछ । नीलो, हरियो, गुलाबी, खैरो तिनीहरू शिकारीहरूबाट लुकाउन, साथीहरूलाई आकर्षित गर्न र शत्रुहरूलाई टाढा रहन चेतावनी दिन यी रङहरू र अन्य रंगहरूमा परिवर्तन गर्छन् । केही प्रजातिहरूले आफ्नो छालाको बनावट पनि परिवर्तन गर्छन्, यसलाई चिल्लो वा बम्पी बनाउँछन्, त्यसैले तिनीहरूले आफैलाई चट्टान र पातहरूमा छद्म गर्न सक्छन् । कतिपयले शार्क जस्ता शिकारीहरूसँग सामना गर्दा मसी जस्तो पदार्थ स्राव गर्छन्, जसले अक्टोपसलाई सुरक्षित रूपमा पौडी खेल्न पर्याप्त समय दिन्छ ।
अक्टोपस आफ्नो रुप फेर्ने कुरामा पनि अब्बल हुने गर्दछन । उदाहरणको लागि, यदि ऊ उग्र देखिन चाहन्छ भने, उसले आफ्नो कालो र सेतो धारीदार हातहरू फैलाएर विषालु समुद्री सर्प जस्तो देखिन्छ । वा यो समुन्द्री भुइँमा, यसको शरीरको छेउमा रहेको हात, विषालु समतल माछा जस्तो देखिने गरी समतल हुन्छ । अक्टोपस खतरामा अक्टोपस मानिसको अगाडि, अक्टोपस गैर-आक्रामक हुन्छ । यद्यपि अक्टोपसहरूसँग सिकारीहरूबाट बच्ने तरिकाहरू छन्, तिनीहरू अन्य खतराहरूबाट जोखिममा रहन्छन् ।
(एरिन स्पेन्सर र यानिस पापस्तामाटिउ, फ्लोरिडा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको अनुसन्धानमा आधारित)
सिँचाइले फेरियो रामपुरका किसानमा जीवनशैली
रामपुर (पाल्पा) । सिँचाइ अभावमा बाँझिएका जमिन अहिले हरियालीमय बनेको छ । हिजो सिँचाइ नहुँदा खेती गर्न छाडिएका बाँझो खेतमा हरियाली अन्नपात फलेको देख्दा हरिबहादुर रानाका आँखाबाट हर्षका आँशु पोखिन्छन् । बालबच्चा